Maamulahaygu wuxuu kiraystay kheyraad waqti-dhiman ah si loo soo saaro nuqul suuq-geyn ah oo aan u baahanahay markaan geyno degelkeena cusub ee suuq-geynta. Qofka la shaqaaleysiiyay wuxuu leeyahay asal suuq geyn adag laakiin asal ahaan malaha suuq geynta websaydhka - waxaan hubaa inay awood u yeelan doonaan inay si fudud ku soo qaataan (waan rajaynayaa sidaas!).
Si aan u bixiyo jiheyn, waxaan siiyay nuqul-qoraha xoogaa agabyo waaweyn oo ku saabsan qorista waxyaabaha ku jira. Mid ka mid ah kheyraadka ayaa ah Junta42's Blog-yada Suuqgeynta Sare. Ma aanan hubin dhammaan baloogyada ku jira liistadaas laakiin waxay leedahay xoogaa kalsooni ah oo la siiyay markii aan helay CopyBlogger halkaas jooga! Waxaan si dhakhso leh u fahmi doonaa boggaga kale.
Adigoon ku sii dheerayn, halkan waxaa ku yaal tilmaamaha ugu sarreeya ee qoraalka. Waa inaan kubilaabaa anigoo sheegaya inaan dambi kujiro kuman isticmaalin qoraaladayda oo dhan. Waxaan rajeynayaa inaad qaban doontaan shaqo ka fiican tii aan qabtay. Adiga doono guuto abaalmarinta!
Cinwaanada xiisaha leh - xulashada cinwaannada aan u ekaan wargeys laakiin, halkii, ugu sarreysa akhristayaasha ay xiiseynayaan maaddaama ay ku boodayaan natiijooyinka mashiinka raadinta iyo soo afjaridda quudintooda RSS.
Adeegso ereyada muhiimka ah iyo ereyada muhiimka ah - fahamka waxa dadku raadinayaan ee shabakadda ayaa fure u ah fahamka sida bartaada looga heli doono makiinadaha wax lagu raadiyo. Adeegsiga ereyada muhiimka ah iyo jumladaha muhiimka ah inta aad ka kooban tahay oo dhan waxay kaa caawin doontaa kaxaynta waxyaabahaas ku jira matoorada raadinta iyo u keenida dadka bartaada raadineysay waxaad soo dhiibtay.
Bog WALBA waa bog soo degitaan ah - Ganacsatada websaydhadu inta badan waxay ka hadlaan bogagga degitaanka oo si dabacsan ayaa loo aqoonsaday inay tahay meesha aad ka dalbanayso booqdaha emayl ama dallacsiin. Si kastaba ha noqotee, maaddaama boggagaaga ama boggagaaga ay ka kooban yihiin (rajo ahaan) si shaqsi ah loogu muujiyo makiinadaha raadinta, tani waxay ka dhigan tahay in bog kasta oo si gaar ah loo qoondeeyey uu noqdo bog degitaan ah! Taasi waxay tiri, waxaa muhiim ah inaad ula dhaqanto bog kasta sidii akhristaha uusan waligiis u soo booqan bartaada kahor. Gaar ahaan baloog! In ka yar 10% ee booqdayaashayda cusub waxay ku soo galaan barteyda boggeyga.
Haddii aad qori kartid waxyaabahaaga si ay akhristayaashu u heli karaan, ugu raaxaystaan, OO aad u hesho dareenka matoorada raadinta waxaad ka heshay isku dheelitirnaan dhammaystiran.